အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည့် (El Paso & Dayton)၊ နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်၊ @BrainOnPorn နှင့်ဒေးဗစ်လိုင်အပြီးတွင်ဂယ်ရီ Wilson၊ YBOP နှင့် Nofap တို့ကိုသင်၏ဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့်နာဇီများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားပါ - Your Brain On Porn
YBOP နှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူနေသည့်အမျိုးသားများအကြားမှားယွင်းသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးရန် Prause & Ley ၏အန္တရာယ်ရှိသော ၄ နှစ်မဲဆွယ်မှုတွင်နာဇီလက်သစ်များနှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
အသစ်တစ်ခုကိုအနိမ့်အတွက် (တစ်ခုခုပြောနေသော), နီကိုးလ်ပရပ်စ်သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏အစီအစဉ်ကိုမြှင့်တင်နေစဉ် Gary Wilson နှင့် NoFap ကိုရှုတ်ချရန်အပြစ်မဲ့သူများ၏ကြေကွဲဖွယ်သေဆုံးမှုများကို ထပ်မံ၍ အသုံးပြုခဲ့သည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှုနှစ်ခု (Dayton နှင့် El Paso) Prause သည်တနင်္လာနေ့တွင်ဂယ်ရီ Wilson၊ YBOP နှင့် Nofap ကိုနာဇီများနှင့်အဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည့် tweets နှင့် screenshots များကိုတင်ခဲ့သည်။
ဤသည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်နည်းဗျူဟာသစ်ကိုအချည်းနှီးဖြစ်၏။ အဆိုပါကဲ့သို့တူညီသောနေ့က Pittsburgh တရားစရပ်ပစ်ခတ်မှု, Prause နှင့် Ley သူတို့၏အသေရေဖျက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဂယ်ရီ Wilson က (yourbrainonporn.com), ဂါယူဆပါသည် (RebootNation) နှင့် Nofap ပစ်မှတ်ထားဆောင်းပါး ( "အဘယ်ကြောင့်ဖက်ဆစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအမုန်း: အမျိုးသားရေးဝါဒ၏မြင့်တက် Anti-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်") ။ ဤဖြစ်စဉ်များကိုသူတို့ငြိုးနှင့်ပရိယာယ်ထုတ်ဖေါ်။
အခြားကဏ္manyများစွာတွင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆိုးများဖြစ်ပွားသည့်အခါ Prause နှင့် Ley တို့သည်ဂယ်ရီ Wilson ၏ TEDx ဟောပြောချက်၊ YBOP သို့မဟုတ် NoFap အကြောင်းဖော်ပြသည့်မည်သည့်မှတ်ချက်များကိုမဆိုအင်တာနက်အားရှာဖွေလေ့ရှိကြသည် - အားလုံးသည်လူဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီများတင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် Prause (သို့) Ley သည်သူတို့၏ဝါဒဖြန့်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်အသုံးပြုရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သောထင်မြင်ချက်များကိုတင်ရန်နာမည်ပြောင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာများရှိ Prause aliases ၁၀၀ ကျော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5။ (ကြည့်ပါ - သူမနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သော Nicole Prause ၏ PDF ဖိုင်သည်).
ဤတွင်၏အခြားကဏ္ဍများကိုဖြစ်ကြသည် "Prause စာမကျြနှာ"နာဇီထောက်ခံအဖြစ် YBOP နှင့်ညစ်ညမ်းပြန်လည်နာလန်ထူလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အနှစ်သာရကမှားယွင်းစွာမှ Prause နှင့် Ley ရဲ့ရွံမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှတ်တမ်းတင်။
အောက်တိုဘာလ, 2018: Prause အောက်ပါအတိုင်း-up, twitter အပေါ်ဂယ်ရီ Wilson ကတိုက်ခိုက်နေခြင်းနှင့် libeling အားဖြင့် "ဖက်ဆစ်" ဆောင်းပါးသည် 300th သို့မဟုတ်ဒီတော့အချိန်များအတွက်
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာ: Prause က xHamster နဲ့ပူးပေါင်းပြီး NoFap & Alexander Rhodes ကို smear လုပ်ဖို့၊ Nicole Prause သည်“ ကျွမ်းကျင်သူ” ဖြစ်သည့် Hit-piece ကိုထုတ်ဝေရန် Fatherly.com ကိုသွေးဆောင်ခဲ့သည်။
ချီးမွမ်းခြင်း / လီယာ /@BrainOnPorn ပို့စ်များကိုသိမ်းဆည်းပါ၊ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းပါ၊ နောက်ထပ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသောအဖြစ်ဆိုးကိုစောင့်ပါ။ ထို့နောက်သူတို့သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောဖန်သားပြင်များကိုဖမ်းယူပြီးအသရေဖျက်မှုဖြင့်ဖော်ပြသည်။ အဲဒါအံ့အားသင့်စရာပါ Prause ယခုအသရေဖျက်မှုနဲ့တရားစွဲမခံရသလဲ? ဂယ်ရီ Wilson နဲ့ Nofap ၏အဲလက်စ် Rhodes နှစ်ဦးစလုံးနာဇီထောက်ခံဖြစ်ကြောင်းမြောက်မြားစွာသောဖြစ်ရပ်များ, Prause ၏မုသာအကြားများပါဝင်သောအရာဝတ်စုံနှင့် ဆက်စပ်. ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကျမ်းကျိန်လွှာပေးခဲ့ကြသည်။ ကြည့်ရှုပါ:
အပ်ဒိတ်: အောက်တိုဘာလ 23, 2019 Alexander Rhodes (တည်ထောင်သူ reddit / nofap နှင့် NoFap.com) သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း နှင့် Liberos LLC။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း။ Rhodes မှတင်သွင်းသောမူလတန်းတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos အားတရားစွဲဆိုမှု (ကြည့်ရှု ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးစာမျက်နှာ).
Prause ရဲ့ screenshots များအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းရင်တောင် Wilson ကရဲ့ TEDx Talk ကိုချိတ်ဆက်နေတဲ့အဖြူအမျိုးသားရေးကျွန်တော်တို့ကိုပြောချင်သို့မဟုတ် porn ကြည့်ရှုပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေယုံကြည်သောသူသည်အခြားမည်သူမဆိုအကြောင်းကိုဘာမျှမပြောပြထားသည်။ အဆိုပါ Ford ကား F150 တစ်ဦးမော်တော် Trend ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နာဇီလင့်များတယ်ဆိုရင်တစ်ဦး Ford ကားမောင်း, ဒါမှမဟုတ် Ford ကားများကအလုပ်သူလူတိုင်းကိုနာဇီကြောင်းကိုဆိုလိုသလဲ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဝါဒဖြန့်ဒီအမျိုးအစားရိုးရိုးပုံကို Prause နှင့် Ley လိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ YBOP အပေါ်သောအမှန်တရား, ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း စာမျက်နှာ: "။ အဖြူ supremacist" ငါဖြစ်၏, တကယ်တော့တစ်ဝေးလစ်ဘရယ် left နှင့်တစ်ဦး၏အလွန် antithesis ငါအများစုအနက်ရောင်ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်ငါ၏အမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သုံးစွဲနှင့်ငါ့ဆွေမျိုးနီးစပ်နှစ်ခုအာဖရိကန်အမေရိကန်တွေလက်ထပ်ဖြစ်ကြသည်။ အမှန်တရားငါ့အကောင့်အတွက်, ဒီအင်တာဗျူးကိုနားထောင်: porn သိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံ Deniers (Wilson ကအတူအင်တာဗျူး).
tweets နေသူတွေ Prause / Ley ၏လက်ရှိထားရန်တွင်။ (tweet #1)
မှတ်ချက်: Prause အဖြူ supremacists မှ Anti-porn စိတ်ဓါတ်များချိတ်ဆက် obsessive ဆုံးဖြတ်နေချိန်တွင်သူမကအဆင်ပြေသည့် Dayton သေနတ်သမားကြောင့်လျစ်လျူရှု, ကော် Betts, ညစ်ညမ်းတဲ့ကြီးမားတဲ့ပန်ကာခဲ့ (ထို Dayton ပစ်ခတ်မှုဟာအယ်လ် Paso ပစ်ခတ်မှုကဲ့သို့တူညီသောတနင်္ဂနွေရက်တွင်သိမ်းပိုက်) ။ Betts အဆိုပါ misogynistic, အထီးကြီးစိုး "ဂိုဂရိုင်းတေးဂီတ" သို့မဟုတ် "pornogrind" အစွန်းရောက်သတ္တုဂီတမြင်ကွင်းအတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းတစ်ဦးသည်အောက်ပါရှိပြီးလိင်အကြမ်းဖက်, သေခြင်း-အစွဲအလမ်းသီချင်းစာသားနှင့်အမျိုးသမီးသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေပုံရိပ်များအတွက်လူသိများသည်။ yeah အိုး Betts လစ်ဘရယ် / "လက်ဝဲ" ဖြစ်ခဲ့သည်.
အောက်တွင်ကျွန်တော် Prause အထက်ပါ tweet (နဲ့အတူ featured နှစ်ခု screenshots များပေးရုပ်ပုံ #1, ရုပ်ပုံ #2) ။ Prause Wilson ကရဲ့အမည်, မိမိအကို TED Talk ကို, သို့မဟုတ်မိမိအက်ဘ်ဆိုက်အဘို့ဤဆိုဒ်များကိုရှာဖွေဆိုလိုတာက, ဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့နာမညျကိုမီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်ဘယ်လိုသတိပြုပါ။ ဖုန် fabricating နှင့်အတူသူမ၏အဆက်မပြတ်ပေးထားဘယ်လို Prause အချိန်ကိုရှာဖွေပါဘူး သုတေသနလုပ်ဖို့? (ထိုသို့သောကြောင်းသူမ၏လာမည့်လေ့လာမှုပြီးစီးအဖြစ် အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်းကနေတဆင့်စွပ်စွဲဝယ်ယူဘာသာရပ်များ - အ စည်းရုံးတိုက်တွန်းလက်မောင်း အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်!)
ဒါ့အပြင် "အမည်မသိ" ဖိလိပ္ပု Zimbardo ရဲ့ကျော်ကြားသောကို TED ဟောပြောပွဲ posted သတိပြုပါ ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို?တစ် Buzzfeed ဆောင်းပါးတစ်ဦး မက်စ် Planck အင်စတီကျု fMRI လေ့လာမှု porn သုံးစွဲသူများနှင့် aidshealth.org အားဖြင့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပေါ်မှာ။ Prause ကြောင်း Zimbardo, BuzzFeed မှာလူတိုင်း, လူတိုင်းမက် Planck အင်စတီကျူ့များနှင့်အတူဆက်နွယ်အားလုံးအကြံပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် aidshealth.org နာဇီထောက်ခံရှိပါသလဲ စိတ်ပျက်ဖွယ်။
ဤသည်၌ ဒုတိယမျက်နှာပြင်ပုံဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့အစွဲအလမ်း cyberstalker (Prause) တစ်ဖန်သူ၏နာမကိုမီးမောင်းထိုးပြ:
အရင်ကဲ့သို့, စာရင်းကိုထိုကဲ့သို့သောဖီးလ် Zimbardo, Buzzfeed, ဘရောင်းတက္ကသိုလ်, ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများ, PlosOne, InternetSafety.org နှင့် Scribd ကဲ့သို့သောအခြားလူသိများတဲ့နာဇီထောက်ခံ (ဟာသ) ကိုလင့်များပါဝင်သည်။
ဒါဝိဒ်သည် Ley ရဲ့ Oh-ဒါ-စစ်မှန်သောစုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှတုန့်ပြန်မှာတော့တစ်စက္ကန့် Prause အားဖြင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် tweet (သူမ obsessive ဂယ်ရီ Wilson ကသို့မဟုတျသူ၏က်ဘ်ဆိုက်အဘို့ဖော်ပြဘာမှများအတွက်အင်တာနက် scours):
ပထမဆုံး Prause စခရင်ပုံ "Sentinel" မဟုတ်ဘဲသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုက်ဘာသားမွေးထက်အဖြူအမျိုးသားရေးဖြစ်ထွက်လှည့်လျှင်ပင်အတော်လေးအစိုင်အခဲဖြစ်သော, သုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ဖော်ပြထားတယ်။ (Prause Sentinel ဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားပေးပါသည်။ )
အဆိုပါ tweet ရဲ့အခိုင်အမာသည်, ယခုကြည့်ရှု လိင်မှုကိစ္စပြpornနာများနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုနှိုးဆွခြင်း၊ လိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်အားရမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ လေ့လာမှုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အတွက်စာမျက်နှာ။
Prause ၏အကြိုက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်အပိုင်းတစ်ခုသို့ (အဆိုပါ Stefan Molyneux Podcast တခုကို):
Molyneux ရဲ့နိုင်ငံရေးကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူနဲ့အင်တာဗျူးဖို့သူတောင်းဆိုတဲ့အခါငါလည်းမသိခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ငါသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးလူမျိုးရေးအပေါ်သူ၏အမြင်များကိုညွှန်ပြဘာမှမတှေ့နိုငျတယျ။ အင်တာဗျူးမှာမင်းကြားနိုင်တဲ့အတိုင်း၊ နိုင်ငံရေးအကြောင်းမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ငါအင်တာဗျူးနှင့် Podcast တခုကိုရာပေါင်းများစွာပြုမိပါပြီ။ အလားအလာရှိသောအင်တာဗျူးသူပြောသည့်စကားလုံးတိုင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
Neo-နာဇီနှင့်အတူအန္တရာယ်ရှိတဲ့ YBOP ပေါင်းသင်းလှုပ်ရှားမှုကိုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ယောက်ျား, နှောင့်ယှက် Ley နှင့် Prause အားဖြင့် 2016 အတွက်အကောင်ပေါက်ခံခဲ့ရသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လိမ်လည်လှည်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင် ဒီ tweet နှင့်အတူ:
Prause ချက်ချင်းထို့နောက် (က retweeted နောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏ tweet ကိုဖျက်ပြီး):
သူတို့ Wilson ကသိက္ခာချဖို့သုံးလို့ရတယ်ဘာမှများအတွက်အင်တာနက် Scouring, Ley / Prause ဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့ TEDx ဟောပြောချက်ကို link တစ်ခုင်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့ (နှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်) ဒါဝိဒျ Duke blog post: အပေါ်သို့ pounced ။ အားလုံးစင်း၏ရှေးရှေးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆက်စပ် (နှင့်အကြံပြုထားသည်) ရှိသည်ဟုဒါ Wilson ကရဲ့ TEDx ဟောပြောပွဲ ", Wilson ကရဲ့ဆွေးနွေးချက်တချို့ 12 သန်းအမြင်များရှိပါတယ်မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု။ "
ဘယ်လိုဒီအဖြစ်ဂယ်ရီ Wilson က ဆက်စပ်. အပါဘူး "အဖြူ supremacist?" ဒါဟာသင်တန်း၏, မပေးပါဘူး။ ဒါဟာရယ်စရာအခိုင်အမာဟစ်တလာသည်သူ၏ခွေးကိုချစ်သောကြောင့်အားလုံးခွေးချစ်သူများနာဇီရဲ့များမှာအကြံပြုခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ဒီ Matrix" ၏ထုတ်လုပ်သူ Neo-နာဇီဖြစ်ကြောင်းဟုဆိုကာနှင့်ညီမျှင် ဒါဝိဒ်သည် Duke သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကြိုက်တယ်.
ဂယ်ရီ Wilson ကသည်သူနှင့် Mark Queppet အထူးသ (Twitter ကိုခံရကြပြီဘယ်သူကိုအချို့ Wilson ကနာဇီကြောင်းစွပ်စွဲဆိုးရေးသားချက်များများအတွက်ပိတ်ပင်) Prause, Ley နှင့်၎င်းတို့၏ minions အားဖြင့်ရရှိစေရန်အတွက်မုသာစကားကိုဆွေးနွေးရန်ထားတဲ့အတွက်ဒီဇူလိုင်လ, 2019 အင်တာဗျူး watch: porn သိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံ Deniers: မာကု Queppet အင်တာဗျူးများဂယ်ရီ Wilson က (ဇူလိုင်လ, 2019) ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ Prause နှင့် Ley တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များကိုသတိပေးသည့်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်ကိုအစီရင်ခံသည့်သုတေသနကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောတစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုအသရေဖျက်ရန်၊ မကြာသေးမီက Prause နှင့် Ley တို့သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်မကြာခဏတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုညစ်ညမ်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးမြှင့်စေခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, 29, ဇန်နဝါရီလ 2019 ရက်နေ့တွင်, Prause တစ်တင်သွင်းခဲ့သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ YOURBRAINONPORN နှင့် YOURBRAINONPORN.COM ရရှိရန်။ ဧပြီလ 2019 ခုနှစ်, Prause နှင့် Ley ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်စေ့စပ် ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု of YourBrainOnPorn.com "RealYourBrainOnPorn.com ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်။
နီကိုးလ် Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအန္တရာယ်ရှိစွာအသုံးပြုခြင်း။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်၏သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏ပုံသဏ္groundာန်များသည်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖန်တီးခဲ့သည်)
ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းကိုသွယ်ဝိုက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ကြော်ငြာ hominem သူမက "ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ" (မကြာခဏကဤပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သားကောင်ဖြစ်ဟုဆိုကာ) အဖြစ်အမည်တပ်ထားသောကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပစ်မှတ်ထားမှတ်ချက်။ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5.